09/02/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Hanatosaka vazo miteny ho an’ny mpankafy eto an-toerana i Samoëla
Mialoha ny hiampitany ranomasina mandritra ny volana vitsivitsy. Hanatosaka vazo miteny ho an’ireo mpankafy eto an-toerana i Samoëla ary manome fotoana ireo mpankafy azy etsy amin’ny Piment Café Behoririka anio alina. Fotoana hiarahan’ity mpanakanto ity indray miara-mihira amin’ireo mpankafy azy izao vazo nahafantarana azy. Toy ny mahazatra dia ezahan’i Samoëla fintinina amin’ny seho ataony ireo rakikira efa navoakany miainga any amin’ny « Mampirevy » tamin’ny taona 1997 ka hatramin’ny « ao anatiny ». amin’ny seho takariva toy izao, mivelatra ihany koa amin’ny fiangaliana hirana mpanakanto hafa i Samoëla.
« Cabaret miavaka » hiarahana amin’i Lôla
Mpanakanto fantatra eo amin’ny mozika milamina ary mpiangaly ihany koa ny gadona mafana. « Cabaret miavaka » no hisantaran’i Lôla ny seho tamin’ity taona ity etsy amin’ny Le Glacier Analakely anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Toy ny mahazatra io toerana io, dia hibahan-teorana kokoa ny mozika mafana. Nahafantarana an’i Lôla rahateo ny fitrandrahana ny gadona batrelaka avy any amin’iny faritra Atsimo-atsinanan’ny Nosy iny. Ankoatra ireo hira milamindamina toy ny « Mbola tena tia », « Lazao »… dia hanana anjara teorana amin’io seho io ihany koa ireo mozika mafana toy ny « Manakara », « Tsy mazava passinao », « Mbola tsis apoaka »…
Tolo-tanana ho an’i Mahefa ao amin’ny tarika Hasina
Sady mpihira no mpilalao sarimihetsika. Ao anatin’ny tsy fahasalamana amin’izao fotoana i Hasina, mpikambana ao amin’ny tarika Hasina. Ho fanampiana azy, hanolotra seho tolo-tanana etsy amin’ny Telozoro Andrefan’Ambohijanahary ny tarika Hasina anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Ho kaloina mandritra izany seho izany ireo hira nahafantarana ny tarika hasina toy ny « Fonjan’i Neny », « babonao », « Kamboty velon-dray », « Tokantrano mamy »… Mpanakanto sy tarika maro no hanotrona azy ireo amin’izany toy ny tarika Rebika, Jeannot…
« Acoustique live » hiarahana amin’i Fanja Andriamanantena sy Rija Ramanantoanina
Samy andrarezin’ny mozika malagasy, na niaina vanim-potoana samihafa aza. Fiarahana tsy fahita firy, no atolotry ny Gasy event amin’ilay hetsika « Accoustik live », ka hiarahan’ny talentan’i Fanja Andriamanantena sy Rija Ramanantoanina. Fampisehoana hotanterahina etsy amin’ny CCEsca Antanimena ny alahady 11 febroary izao amin’ny 4 ora tolakandro. Seho efa saika natao ny zoma 13 oktobra fa voatery nahemotra noho ny resaka pesta, ary lasa sehotafiditra amin’ny fankalazana ny fetin’ny mpifankatia.Hitovian’izy mianadahy mianaka ireto ny fironana kokoa any amin’ny hira manakaiky ny jazz, samy manga feo ary samy havanana amin’ny fitendrena piano. Ankoatra azy mianadahy mpihira eny anoloan’ny sehatra, dia mpitendry efa kalaza sy manana ny maha-izy azy no hanotrona azy ireo mandritra ny seho izay ahitana an-dry Zafera eo amin’ilay gitara besobe, Sammy Andriamanoro eo amin’ny piano, Datita Rabeson eto amin’ny gitara, Naly eo amin’ny fikapohana ny amponga maroanaka ary Hasina eo amin’ireo zava-maneno tsofina (Trompetra sy sax).
Lapan’ny Fanatanjahantena – Mahamasina
Rossy nitondra « Hafatra » ho an’ireo mpankafy azy
EFa fantatra tamin’ireo seho ankalamanjana. Hiova endrika kely ny fampisehoana ataon’ny tarika Rossy ny alahady izao etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy fatanjahantena Mahamasina. Hizara roa miavaka tsara ny seho ka ireo hira milamindamina no hibahan-toerana amin’ny ampahany voalohany ary hivelatra amin’ireo hira mafana sy mampandihy kosa amin’ny fizarana faharoa. Hanakoako ao anatin’ny fizarana voalohany ireo hira milamina toy ny « Hafatra », « Any malala », « Dia ilay fitia »… Hanohy izany kosa avy eo ry « Ramalala », « Bal Kabôsy », « Bienvenu »….
Efa rava indroa ny fiangonana Fjkm Androva Vaovao Famonjena noho ny fandalovan’ny rivodoza tamin’ny 1984 sy ny haintrano tamin’ny 1991 nandritra ny krizy nisy teto amin’ny firenena. Tamin’ny taona 1995 ireo mpivavaka tany Mahajanga aman’arivony ...Tohiny